Izindaba - Mangaki amakhilomitha okushintsha ama-brake disc njalo?
Izingxenye elingasebenzi Mercedes-Benz
Izingxenye elingasebenzi for Scania
Izingxenye elingasebenzi Volvo
Izingxenye ezingasebenzi ze-DAF
Izingxenye ezingasebenzi ze-IVECO
Izingxenye ezingasebenzi ze-MAN
Izingxenye ezingasebenzi ze-RENAUL
Mangaki amakhilomitha okushintsha ama-brake disc njalo?
Kuthiwa ama-brake pads awalungiswa ukuthi azoyiguqula kangaki. Kuya ngezimo zokushayela nemikhuba yokushayela. Le mikhuba izothinta ukusetshenziswa kwama-brake pads. Uma ukwazi ukuyazi kahle, uzothola ukuthi ezimweni eziningi asikho isidingo sokunyathela amabhuleki nhlobo. Uma ifilimu isetshenziswe kahle, ingafinyelela kumakhilomitha ayi-100,000.
Lapho-ke, ngaphansi kwaziphi izimo okudingeka ungene esikhundleni samapayipi wama-brake, ungadlula ekuhlolweni okujwayelekile okulandelayo, bese ukubuyisela ngokushesha uma kuhlangabezana nemibandela.
1. Hlola ukushuba kwamapayipi amabhuleki
Hlola ukuthi amaphedi amabhuleki mancane yini. Ungasebenzisa i-flashlight encane ukubuka nokuhlola. Lapho ukuhlolwa kuthola ukuthi impahla emnyama yokushayisana kwamapayipi amabhuleki isizophela, futhi ubukhulu bungaphansi kuka-5 mm, kufanele ucabangele ukuyifaka esikhundleni sayo.
2. Umsindo wamabhuleki
Uma uzwa ukukhala kwensimbi okunzima emabhulekini ngesikhathi ushayela nsuku zonke, kufanele unake ngalesi sikhathi. Le yinsimbi ye-alamu kumaphakethe amabhuleki aseqale ukugqoka i-disc brake, ngakho-ke lo msindo wensimbi obukhali.
3. Braking ibutho
Uma ushayela emgwaqeni futhi unyathela ibhuleki, uma uzizwa uqine kakhulu, kuhlale kunomuzwa othambile. Imvamisa kuyadingeka ukuthi ucindezele ibhuleki ujule ukufeza umphumela wangaphambi kokubopha. Lapho kusetshenziswa ukubopha okuphuthumayo, isikhundla se-pedal ngokusobala sizobe siphansi. Kungenzeka ukuthi ama-brake pads alahlekelwe ukungqubuzana futhi kufanele ashintshwe ngalesi sikhathi, ngaphandle kwalokho kuzokwenzeka ingozi enkulu.
Mangaki amakhilomitha okushintsha i-disc brake?
Ngokuvamile, i-disc brake iyashintshwa njalo kumakhilomitha angama-60,000-70,000, kepha imininingwane isencike kwimikhuba yokusebenzisa yomnikazi nemvelo. Ngoba wonke umuntu unemikhuba ehlukene yokushayela, ama-disc brake namapads amabhuleki ahlukile. Eqinisweni, ama-brake disc nama-brake pads kungumsebenzi obalulekile okufanele uhlolwe ngaphambi kokushayela. Ezinye izitolo ze-4S zinomthwalo omkhulu futhi zingakukhumbuza ukuthi ama-disc brake kudingeka ashintshwe.
Lapho ama-brake pads efakwa esikhundleni kaningi kakhulu, ukugqokwa kwama-brake disc kuzokhula. Ngalesi sikhathi, ama-disc brake kumele abuyiselwe. Ama-disc brake kufanele ashintshwe ngemuva kokushintshwa kwamapayipi amabhuleki amabili noma amathathu kushintsho olulodwa. Ngakho-ke, lapho kushintshwa ama-brake pads, ama-disc brake kufanele futhi ahlolwe ngesikhathi, futhi afakwe lapho agqoke kakhulu.
Ngaphezu kokugqokwa okujwayelekile kwediski yamabhuleki, kukhona nokugqokwa okubangelwa ikhwalithi yephedi yamabhuleki noma idiski yamabhuleki nokwakhiwa kwendaba yangaphandle ngesikhathi sokusebenza okujwayelekile. Uma ihabhu lamabhuleki ligqokwa ngodaba lwangaphandle, umgodi ojulile noma iphutha lokugqoka indawo yediski (kwesinye isikhathi lincane noma liwugqinsi) Kuyakhuthazwa ukuthi ukushintshwa kuzothinta ngqo ukuphepha kwethu kokushayela ngenxa yokwehluka kokuguga.
Amaphuzu okumele anakwe ekunakekelweni kwamadiski amabhuleki: Ngoba ama-brake disc azokhipha ukushisa okuningi ngesikhathi sokubopha amabhuleki, ungagezi imoto ngokushesha ngemuva kokuba imoto ibhulekiwe. Kufanele ucishe ukubopha ukuze unciphise izinga lokushisa elingaphezulu kwamadiski amabhuleki ukuvikela ama-disc brake disc asezingeni lokushisa eliphezulu ngenxa yokuxhumana namanzi abandayo. Ukuncipha okubandayo kukhiqiza ukusonteka nemifantu. Ngaphezu kwalokho, indlela engcono yokwandisa impilo ye-disc brake ukugcina umkhuba omuhle wokushayela nokuzama ukugwema ukuma okungazelelwe.
Bhalisela Uphenyo Lwethu:
93 Tianyang Road, Fengqiao town, Zhuji City, Isifundazwe Zhejiang